Madaxweynaha dowlada Puntland oo 97 maxbuus cafiyay ciida Fidriga awgeed - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha dowlada Puntland oo 97 maxbuus cafiyay ciida Fidriga awgeed
Xarunta guud ee ciidamada asluubta dowlada Puntland. Sawirka: Puntland Mirror.
Garoowe-(Puntland Mirror) Digreeto uu soo saaray Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali maanta oo Sabti ah ayuu cafis ugu fidiyay tiro maxaabiis ah ciida Fidriga awgeed.
Sida lagu sheegay digreetada madaxtooyada, Madaxweynaha ayaa cafis u fidiyay 97 maxbuus oo ku eedaysnaa dambiyo fudud.
Saamaxaadan ayaa imaanaysa kahor damaashaadka Ciida iyadoo maxaabiista ay qoysaskoodii dib ula midoobi doonaan.
Madaxweynayaasha Puntland ayay dhaqan u ahayd cafinta maxaabiista xilliyada maalmaha qaranka iyo kuwa diiniga ah.